नेपालमा जे चाह्यो त्यहीँ गर्न सफल युरोपियन युनियनको नयाँ रणनीति के? को को परिचालित हुँदैछन्?Nepalpana - Nepal's Digital Online
विकाश कुमार ठाकुर आषाढ २० २०७८
रुपा प्रकरण उचाल्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । नेवार र दलितबिच दुरी बढाउन सक्रिय छन् । यस्तोमा नेपालपानाले त्यो मिसनलाई थोरै भए पनि काउन्टर दिने प्रयास गर्‍यो । गत असार १० गते 'नेपालमा जातिय द्धन्द्ध भड्काउन रुपा सुनारलाई युरोपेली युनियनले दियाे डेढ करोड !' शीर्षकमा नेपालपानाले खुलासा गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भईसकेपछी नेपालपानामाथि केही सीमित ब्यक्तिहरुद्वारा योजनाबद्ध रुपमा प्रहार पनि गरियो । यता, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पनि 'गोरखापत्र'मा लेख लेखेर जातीय द्वन्द्व भड्काउने र सरकारलाई जोडेर बदनाम गर्ने योजनालाई धक्का दिएका छन् । उनले रुपाको पक्षपोषण गरेर यो मुद्दा उचाल्ने र सरकारको आलोचना गर्ने सेतोपाटीका सम्पादक अमित ढकाललाई मिसन पत्रकारिता छाडेर तथ्यको बहसमा आउन चुनौती दिएका छन् ।
दलित अभियन्ता रुपा सुनारको स्टन्ट: जातीय द्वन्द्व गराउने युरोपियन युनियनको खेल, घरबेटीका श्रीमानले बाहिर ल्याए रुपाको असली कर्तुत
नेपालमा जातिय द्धन्द्ध भड्काउन रुपा सुनारलाई युरोपेली युनियनले दियाे डेढ करोड !
रुपा मार्फत जातिय द्वन्द्व चर्काएर सामाजिक सद्भाव भत्काउन युरोपियन युनियको खेल, 'गोप्य कुरा लिक' हुँदा देखियो छटपटी!
जातिय द्वन्द्व बढाएर डलर खेती गर्नेहरुलाई लखेट्न मैदानमा उत्रियो नेवा समुदाय, राष्ट्रिय युवा संघको समर्थन
आषाढ २०, २०७८ आइतवार ०८:५४:४५ बजे : प्रकाशित
# युरोपियन युनियन